बीमांकी अध्ययनको वास्तविकता : अत्यधिक कमाइ हुने क्षेत्र भए पनि किन आकर्षण देखिँदैन ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण बीमांकी अध्ययनको वास्तविकता : अत्यधिक कमाइ हुने क्षेत्र भए पनि किन आकर्षण देखिँदैन ?
ल्याटिन शब्द एक्च्युरियसबाट एक्च्युरी शब्द आएको पाइन्छ । यसको अर्थ छोटकरीको साहसिक लेखन विधि वा रजिस्टार भन्ने हुन्छ । यही कुरा बुझाउन नेपालमा बीमांकी शब्द प्रयोग गर्ने गरिएको छ । एक्च्युरी त्यस्तो व्यक्ति हो जसले कुनै घटनाको सम्भाव्यताको विश्लेषणबाट योजना निर्माण गरी त्यस्तो सम्भाव्य घटनाको सामना गर्न वा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । जोखिमको वैज्ञानिक मापन र व्यवस्थापनको विषयका रूपमा सत्रौं शताब्दीदेखि नै सम्भाव्यता र नियमित वृत्ति विधिका रूपमा अध्यायन थालिएको पाइन्छ ।
जोखिम तथा अनिश्चितताको मापन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययनको विषय नै एक्च्युरी हो । यस्तो जोखिम तथा अनिश्चितता कुनै पनि कम्पनीको वासलातको दुवै पक्षमा प्रभाव पार्छ । फलतः सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनको शीप आवश्यक हुन्छ । एक्च्युरीले वित्तीय सुरक्षा व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्छ । एक्च्युरीमा व्यावसायिक वातावरण बुझ्नुका साथै विशिष्ट विश्लेषण क्षमता हुनुपर्छ । मानवीय व्यवहारगत कुराले जोखिमलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा दख्खल राख्छ । एक्च्युरीले व्यावसायिक वातावरणको गहन अध्ययन, विशिष्टीकृत विश्लेषण र मानवीय व्यवहारका कारण सृजित जोखिम विश्लेषण गर्छ । यसका लागि सूचना प्रणाली मार्फत जोखिम नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास र व्यवस्थापन समेत गर्न सक्छ । साधारणतया एक्च्युरी सर्टिफिकेशनका लागि चरणबद्ध तहहरू उत्तीर्ण गर्नुका साथै व्यावसायिक अनुभव समेत आवश्यक पर्छ । राष्ट्र तथा बोर्ड अनुसार एक्च्युरी अध्यापनका तहगत संरचना फरकफरक हुन्छन् । तर, अध्यापनको तहगत सीमा र कठिनता समग्रमा समानता भेटिन्छ ।
एक्च्युरी मुख्यतः गणितशास्त्र यसमा पनि विशेष गरी क्याल्कुलसमा आधारित सम्भाव्यता तथा तथ्यांकशास्त्र गणितको अध्ययन गरिन्छ । साथै अर्थशास्त्र, कम्प्युटर, वित्तशास्त्र तथा व्यावसायिक विज्ञान समेत यसका अभिन्न अंग हुन् । फलतः बीमा व्यवसाय सम्भाव्यता र अनिश्चितताको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा एक्च्युरीको भूमिका मुख्य रहन्छ । बीमांकी डाटाको व्यवस्थापन र विश्लेषणबाट भविष्यमा मृत्यु, बिरामी, घाइते हुने, अपांगता हुन सक्ने तथा सम्पत्तिको क्षति हुन सक्ने सम्भावनाको यकिन र त्यसबाट हुन सक्ने हानिनोक्सानीको गणना गर्छन् । नोक्सानीको गणना गरी सो जोखिम वरण गरे बापतको लागत विश्लेषण गरी सो जोखिम वरण गर्ने खालको बीमा पोलिसी तयार गर्ने, विगतको आधारमा भविष्यमा हुनसक्ने घटना र क्षतिको पूर्वानुमान गर्ने कार्य बीमांकीले गर्ने गर्छ । त्यस्तै बीमांकीले पेन्सनको कुल दायित्वको मूल्यांकन, योगदानको स्तर निर्धारण गर्ने कार्य गर्छ । फलतः निवृत्त जीवनमा व्यक्तिको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति हुने गरी लगातार आम्दानी प्राप्त गरोस् र योगदान बापतको सम्पत्तिको सही व्यवस्थापन गरी ग्रहणयोग्य जोखीमको तहमा अधिकतम लाभ लिन सकोस् भनेर त्यस किसिमको लगानी तथा जोखिम व्यवस्थापन नीति समेतको तर्जुमा गर्ने गर्छन् ।
बीमांकी विषयमा समेत भिन्न विशिष्टीकृत अध्ययनका विधा छन् । जीवनसँग सम्बद्ध बीमांकी अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा निवृत्तभरण पर्छ । यस अन्तर्गत मृत्युदर, बिरामी संख्या, तथा लगानी सम्बन्धी जोखिमको विशिष्टीकृत अध्ययन तथा व्यवस्थापनको विषयलाई दृष्टिगत गरी अध्यापन गरिन्छ । जीवन बीमा, नियमित वृत्ति, निवृत्तभरण, अशक्तता बीमा, स्वास्थ्य बीमाका साथै अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्योपचार बीमा जस्ता क्षेत्रहरू पनि पर्छन् । उल्लिखित जोखिमका अतिरिक्त सामाजिक बीमा कार्यक्रमहरूलाई जनमत, राजनीतिक वातावरण, आय तथा व्ययको स्तर, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, उपचार प्रविधि, मुद्रास्फीति तथा जीवनयापनको लागत जस्ता कुराले असर पार्छन् ।
गैरजीवन बीमांकीलाई सम्पत्ति तथा भवितव्य घटना (दुर्घटना) सँग सम्बद्ध अध्ययन मानिन्छ । बीमांकीमा भौतिक तथा कानूनी जोखिम र सम्पत्तिमा पार्ने जोखिमसँग सम्बद्ध विषयमा रहेर अध्यापन हुन्छ । सवारी बीमा, घर बीमा, व्यावसायिक सम्पत्तिको बीमा, कामदार सुविधा, दुष्ट व्यवहार बीमा, दायित्व बीमा, सामुद्रिक बीमा, आतंकवाद बीमालगायत अन्य दायित्व बीमा यसभित्र पर्छन् ।
इन्टरप्राइज जोखिम व्यवस्थापनभित्र गतिशील वित्तीय विश्लेषण, स्ट्रेस टेस्टिङ, कर्पोरेट जोखिम नीति तयार पार्ने तथा त्यसको सञ्चालन गर्ने आदि विषय पर्छन् ।
बीमांकीको परम्परागत रोजगारी अन्तर्गत बीमा प्रिमियमको निर्धारण, तथा बीमा कम्पनीको सञ्चितिको गणना गर्ने काम हुन् । क्षतिको लागत र सो घटना दोहोरिन सक्ने अवस्था तथा त्यसले पार्न सक्ने हानिको स्वरूप लगायत पूर्वघटनाको आधारमा बीमा पोलिसीको निर्धारण गर्ने कार्य पनि पर्छन् । वित्तीय तथा गैरवित्तीय क्षेत्रको इन्टरप्राइज रिस्क म्यानेजमेन्ट, बासेल २ तथा सल्भेन्सि २ लागु भए पश्चात् सञ्चालन जोखिमको गणना तथा व्यवस्थापन, लगानी परामर्श, सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायत क्षेत्र समेत यसभित्र पर्छन् ।
नेपालमा बीमांकीको आवश्यकता
बीमा समितिको हालैको विवरण अनुसार रोस्टरमा सूचीकरणका लागि माग भइआएको बीमांकीको सूचीकरणका लागी दुईदुई पल्ट सूचना जारी गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्दा पनि मागभन्दा कम आवदेन पर्‍यो । प्राप्त १७ आवेदनमा केवल १ जना नेपाली छन् जो नेपाल बाहिर कार्यरत छन् । हालको अवस्थामा मात्रै १८ देखि २० बीमांकी बीमा क्षेत्रमा मात्रै आवश्यकता छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतमा पनि बीमांकीको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै त्यसमा अन्तर्निहित जोखिम विश्लेषणका लागि समेत बीमांकीको आवश्यकता छ । तर, पूर्ति पक्ष शून्य प्रायः छ । आंशिक माग र नीतिगत ढुलमुलेपनले गर्दा नेपालमा बीमांकीको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या कम छ । अध्ययन पूरा गरिसकेकाहरू पलायन भएका छन् वा वैकल्पिक काममा लागेका पनि छन् । यसमा बीमा समिति दोषी देखिन्छ । वार्षिक करोडौं रुपैयाँ विदेसिइरहेको छ । अध्ययनरत या त विदेश पलायन भइरहेका छन् या बीचैमा बीमांकी अध्ययन छोडी अर्को विधातिर लागेका छन् । यो अवस्था समग्र अर्थतन्त्रका लागि नै प्रत्युत्पादक साबित भइरहेको छ । नियामक बीमा समितिले बीमित मृत्युतालिका संशोधन नगरेको करीब १ दशक भइसकेको छ भने हालै संशोधित लगानी निर्देशिकामा समेत जोखिम पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसले गर्दा समग्र बीमा उद्योगलाई नै जोखिममा पार्ने निश्चित छ । जनशक्तिको कमी र भएको जनशक्तिको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । बीमा समितिले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति त लिएको छ । तर, कार्यविधि तयार गरेको छैन ।
साधारणतया बीमांकीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मासिक करीब २० देखि ३० लाखको आम्दानी गर्छन् । नेपालको अस्पष्ट नीतिका कारण उनीहरूले नेपाललाई कर्मथलो बनाउन सकिरहेका छैनन् भने नेपालले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ विदेशी बीमांकीलाई भुक्तान गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि वित्तीय तथा जोखिम व्यवस्थापन गरी लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गराउन राज्यस्तरबाट बीमांकी विषय अध्ययनमा प्रेरित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बीमांकीको २/३ ओटा विषय पास भएपछि नै उनीहरूका लागि आकर्षक बजार छ । नेपालले पनि बीमांकीका लागि यस्तै प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ ।
(लेखक इन्स्टिच्युट एन्ड फ्याकल्टी अफ एक्च्युरी यूकेका बीमांकी विषयमा अध्ययनरत छन्)